Ekwela ka Cigna gbuo ọchụ | Martech Zone
Zuo ike n'udo, Nataline.
If you've never been denied benefits, screwed on an insurance settlement, or heard of someone who has – you're a lucky person! The insurance industry is one of the most profitable in the United States. The math is quite simple, the more people they let die – the better the profits.
Anyị nwere ike ịgbanwe nke a na Intanet na blogosphere? Anyi nwere ike iji ozi nke Cigna eme nzuzu and make a difference? They claim they are in the business of caring. Is that true? Doesn't caring actually cost more money than not caring? I believe that Doctors care, but Insurance companies have the opposite incentive.
N’akwụkwọ ozi iri na abụọ nke ọnwa Disemba, ndị dọkịta anọ rịọrọ mkpuchi ahụ ka ọ tụlee. Ha kwuru na ndị ọrịa nọ n'ọnọdụ ndị yiri ya bụ ndị na-amalite transplan nwere ọnwa isii ka ọ dị ndụ ihe dịka pasent 11
Cigna kwuru na ọ bụ nnwale ma amụma ya ekpuchighi ya.
Nataline Sarkisyan anwụọla ugbu a mgbe afọ atọ nke ịlụ ọrịa leukemia ọgụ na ịgọnarị ihe achọrọ site na ụlọ ọrụ Insurance ya, Cigna.
This is nothing short of first degree murder in my eyes. An employer who loses an employee due to unsafe working conditions can be charged with manslaughter or wrongful death, why can't an Insurance Company? Cigna didn't ignore the situation, they analyzed it and made a conscious choice to leave the patient to die.
These stories both anger and terrify me. If you own stock in Cigna or even a Mutual Fund that has Cigna in the mix, I would urge you to not support such a company. It's time that insurance companies quit lining their pockets with the blood of the very people that pay them.
More on Nataline's struggle:
Nataline nwụrụ, ihere na Cigna
Cigna gburu Nataline
CIGNA Executive Management Team - olee otu ị ga-ehi ụra n'abalị?!
H. Edward Hanway, Onye isi oche na onye isi oche, CIGNA Corporation
Michael W. Bell, Onye isi oche ndị isi na onye isi ego, CIGNA Corporation
David M. Cordani, Onye isi ala, CIGNA HealthCare
Paul E. Hartley, Onye isi ala, CIGNA International
John M. Murabito, Onye isi oche ndị isi, Ndị ọrụ na ndị ọrụ, CIGNA Corporation
Carol Ann Petren, Onye isi oche ndị isi na Onye Ndụmọdụ General, CIGNA Corporation
Karen S. Rohan, Onye isi ala, CIGNA Group Insurance na President, CIGNA Dental & Vision Care
Tags: edemedeỊhụ ihu igweAzụmaahịa zuru ụwa ọnụJascha Kaykas-WolffMindjetOrganization
Dec 22, 2007 na 12:00 PM
Dec 22, 2007 na 2:03 PM
Akụkụ dị egwu dịịrị m bụ nke a - ụlọ ọrụ inshọransị na mba a nwere ikike ịgọnahụ azịza na dọkịta na-ekwusi ike na ọ ga-agbatị ma ọ bụ chebe ndụ.
Dec 22, 2007 na 6:21 PM
Ee, ọ na-atụ ụjọ, mana ọ bụ eziokwu kemgbe ogologo oge. Ihe a merenụ dịtụ nro: peoplefọdụ ndị ga-anwụ n'ihi na onye na-enye onyinye anaghị abịa. N'ebe a, o doro anya na anyị nwere ikpe ebe enwere otu, ma ọ nwetaghị ya.
Ma ọ bụ karịa, ọ nwere ike ịnwe, mana ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ nwere ike na-ere pensụl n'okporo ámá mgbe akụ ha gụsịrị. Nke bu ihe kpatara ha jiri chee na ha nwere mkpuchi. Ihe doro anya na foto a…
Dec 22, 2007 na 7:11 PM
Ọ dị mma ịhụ gị ebe a ma nwee olile anya na ị na-eme ọfụma.
Enwere m olileanya na anyị nwere ike itinye nrụgide dị mkpa maka ndị omebe iwu anyị ịhapụ nlekọta ndị ọrịa ebe ọ kwesịrị - ya na dọkịta na ọ bụghị ụlọ ọrụ mkpuchi.
Dec 22, 2007 na 6:48 PM
Dec 22, 2007 na 7:18 PM
Dabere na Forbes, H Edward Hanway’s total compensation is $28.82 million and his 5-year is $78.31 million. Hanway has been CEO of Cigna (CI) for 6 years and has been with the company for 28 years.
Nke ahụ bụ otú o si eme ka ha dịghachi ná mma.
Dec 25, 2007 na 2:21 PM
Ruo mgbe anyị niile ga - ewe oke iwe wee kpọọ oku, dee akwụkwọ ozi ma mee ka iwe anyị wee mara, omume ndị a ga - aga n’ihu. Jiri mkpịsị odee, ọnụ gị na akwụkwọ akpa gị kwuo ya.
Kpọtụrụ onye omeiwu gị. Email ndị na-ede akụkọ akụkọ na-abụghị eziokwu. Kpọtụrụ ma yie egwu ịhapụ ụlọ ọrụ na-akpọsa ihe ngosi ndị a.
Dee 26, 2007 na 9: 10 AM
Ihe a niile na-ewelite ajụjụ ndị ọzọ wee zaa m.
Dee 26, 2007 na 9: 34 AM
Dee 26, 2007 na 10: 16 AM
M tụkwasịrị ndị dọkịta obi dịka m tụkwasịrị ụlọ ọrụ mkpuchi obi.
N't gaghị arịọ ikike ka ị mee ihe ga-etinye ego n'ụgwọ n'akpa gị?
A. Mmetụta ezinụlọ anaghị emetụta ya.
B. Mmetụta ha adịghị emetụta (na-aga maka mkpuchi na ndị dọkịta)
Nwere ike ime mkpebi ikpeazụ.
Ọ bụghị ihe ndabara na ọtụtụ ndị dọkịta bụ ndị nwere ego na aka ha.
Yabụ na isiokwu, ị ga-asị na ị na-akwado nlekọta ahụike ụwa?
Dec 26, 2007 na 2:12 PM
Re: Uwa na aru ike
Dec 26, 2007 na 2:17 PM
Dec 26, 2007 na 2:28 PM
Dec 26, 2007 na 4:24 PM
Fixing the system will mean limiting malpractice damage awards and grounds for liability lawsuits, limiting insurers’ profits and putting the practice of medicine back in the hands of the folks who paid over $100K for their education as a doctor. You should really read Dr. Kirschenbaum’s series on Doctors, Money and Medicine for a different perspective. Malite ebe a.
Dec 26, 2007 na 4:58 PM
Ihe niile m gụrụ dị ka ihe na-egosi ihe mgbaru ọsọ maka imeju umeji bụ 65% ohere nke ibi ọnwa isii ọzọ.
Ma mgbe ha bụ okwu, echeghị m na ndozi bụ nlekọta ahụike ụwa, nke na-ebugharị ibu arọ nye gọọmentị anyị ma ha na-ackụ.
Dec 26, 2007 na 8:07 PM
Kwa otu Associated Press isiokwu na http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1, e hotara ndị dọkịta nọ na UCLA dị ka ndị na-ekwu “… ndị ọrịa nọ n'ọnọdụ yiri nke Nataline bụ́ ndị a na-amụgharị mkpụrụ osisi nwere ọnwa isii nke ihe dị ka pasent 65.”
Ihe m ghọtara nke ahụ pụtara bụ na ọ ga-enwe ohere pasent 65 nke ịlanarị ọnwa isii mbụ, ọ bụghị, dịka ị kwurula, na ọ ga-anwụ agbanyeghị na ọnwa 6. Ọ na-arịa ọrịa ga-egbu ya n'ihi na ọ nwere ọrịa imeju nke ọgwụgwọ leukemia na-akpata. Nghọta m bụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọnwa isii, ọ gaara enwe ohere ọ bụla iji mee ya ọtụtụ afọ.
O jiri ezi obi na-egosi m site na post gị na ị kwenyere na nlekọta ahụike nwere ike ịme ụfọdụ ọfụma kwesịrị ịdị maka ndị nwere ike ị nweta ya, yana ndị ọzọ niile ka mma ịnwụ. Ekwenyere m n’ọtụtụ isi okwu na ntụnye gị; Echere m na mkpezi nke ndị ọzọ bụ ezigbo echiche, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ dị ọsọ ọsọ, mana echiche gị nke "nwere ike hapụ ya ka ọ nwụọ, ọ na-aga agbanyeghị" na-abịa dị ka pụtara pụtara mmụọ. Ọ na-enye echiche na naanị gị nwere mmasị na onwe gị na ọ nweghị onye ọzọ.
Dec 26, 2007 na 8:18 PM
Achọrọ m ka mmadụ niile biri ma nwee ike ịnweta mkpuchi ahụike, agbanyeghị echeghị m na ọ bụ ebe gọọmentị na-enye ya.
Ọ ga - akara m mma ịhụ gọọmentị pere mpe (yabụ, mwepu IRS), ọ bụghị karịa ya.
Ọ ga-amasị m ịhụ ederede ederede nke ọma, naanị eziokwu ụdị akụkọ na ya.
Onye nnọchiteanya si Valencia, California dere
Congressman dere: N'ime akwụkwọ ozi edepụtara na ụbọchị nke iri atọ na atọ nke 30 na Dept of Corporations. Detuo leta enyere Jo Joshua Godfrey.
Ezigbo Bishọp Bishop,
Anọ m na-ede n'aha ndị mejupụtara m Josephine Joshua Godfrey bụ ndị nwetagoro nnukwu ihe isi ike site na California nyere HMO ikike, nlekọta ahụike CIGNA.
Oriakụ Godfrey rịọrọ ka CIGNA ghara ịchọpụta nke ọma wee gwọọ ọrịa kansa akpa ume ya site na Machị 1993 rue Ọgọst 1994. O doro anya na otu afọ mgbe nke a gasịrị ndị dọkịta na-abụghị ndị Cigna chọpụtara ngwa ngwa Carcinoid na akpa aka ekpe ya wee gwa Oriakụ Godfrey na Tumor kwesịrị ịchọpụta na mbido 1993. N’agbanyeghi na ekwupụtaghị na etuto ahụ dị na CIGNA, e wepụrụ etuto ahụ na ST. Slọ ọgwụ Josephs na Burbank California. Ọrịa na-arụ ọrụ gbasara ọrịa na-akọ na akpụ ahụ “tozuru oke mature tozuru oke.
Mgbe GIGNA na-enyocha ya, Oriakụ Godfrey rịọrọ ugboro ugboro ka a kpọga ya onye ọkachamara maka ọgwụgwọ ahụike. Maka ebumnuche na-enweghị nkọwa GIGNA jụrụ ịkpọtụrụ onye ọkachamara maka ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. CIGNA jụkwara ịhapụ akwụkwọ ndekọ ahụike nke Oriaku Godfrey ka onye dibịa ọzọ nwee ike inyocha akụkọ gbasara ahụike ya wee nye usoro nkwekọrịta. Naanị mgbe ọtụtụ arịrịọ rịọrọ ka ewepụtara ndekọ ndị ahụ. Ma, Oriakụ Godfrey kwenyere iji kpuchido CIGNA site na ezighi ezi akwụkwọ gbanwere n'ụzọ ọjọọ.
Steeti California nwere ibu ọrụ ichebe ndị ahịa debanyere aha na HMOS. A chọrọ steeti ka ọ kụziere ma gwa ndị na-azụ ahịa ihe gbasara HMOS. N'ime ihe karịrị nde 12 Californians na HMOS na-akụziri ma na-agwa ndị na-azụ ahịa gbasara ịdị mma na ịnweta nlekọta ahụike bụ ọrụ dị mkpa. N'ụzọ dị mwute, ọ bụrụ na ahụmịhe Oriakụ Godfreys bụ ngosipụta ọ bụla banyere otu ndị ahịa HMOS si agwọ mkpa ahụike, anyị ga-enyochagharịrị usoro nlekọta ejiri. Ndị omebe iwu amalitela ịchọpụta HMOS na ụdị ọgwụgwọ ha na-enye. Ọtụtụ ndị ọrịa kwenyere na HMOS na-agọnahụ ndị ọrịa na ozi oge niile iji belata ego. O doro anya na "iwu gag" nke na-egbochi ndị dọkịta na-atụ aro ọgwụgwọ nke HMO adịghị ekpuchi bụkwa nchegbu dị mkpa.
My Constituent abụghị naanị onye nwere nsogbu na HMO.
(1) Ruth Macinnes nke San Diego nwụrụ mgbe ndị dọkịta HMO na-enweghị ike ịlele ahụike iji chọpụta ma gwọọ ọrịa obi ma zaghachi ọrịa mberede nke cardiogenic; (2) Will Spense nke Los Angeles na-alụ ọgụ maka ndụ ya ma ọ bụrụ na ọrịa cancer lymphoma na-abụghị Hodgkins bụ nsogbu -achọpụta ihe karịrị otu afọ. Agwara m na dịka ndị a, e nwere ọtụtụ puku ndị ọzọ jikọtara mba ahụ na akụkọ yiri ya.
Enwere m nkwanye ùgwù na ụlọ ọrụ gị na-enyocha nkwupụta ndị a, ma nyochaa ma a na-enyocha HMOS nke Ọchịchị yana ndị na-azụ ahịa nyere ha ozi ha chọrọ iji hụ na nlekọta ahụike dị mma. Ekwenyere m na Oriakụ Chineke ejirila usoro kwesịrị ilebara ya anya mejọọ ya. Ọ bụrụ na ekpughere mmebi ahụ, ana m arịọ ka e mee ihe mmanye megide ndị instutionsn maka ndị na-emegbu ndị ahịa. Nnyocha zuru ezu ga-enyere aka hụ na steeti mezuru ọrụ ya karịrị ndị ahịa HMO nde 12. Biko zaghachi onye isi mpaghara m, Armando E. Araloza na mbido mbido gị.
Ngalaba Corp zaghachi
JO JOSHUA GODFREY NA-EKERE ND PEOPLE KALIFORNIA NA MBA A:
NTPARKWU NDOR ỌZỌ NA-AZ TOGHE ND TO KWESESSRESS MBỌCH D B D DBỌCH J JULY 2ND, 1996
RE: Debanye No Alfa
Anatala m akwụkwọ ozi May 30, 1996 gị natara na June 4, 1996, gbasara ndị akpọrọ aha ha na atụmatụ ọrụ nlekọta ahụike ha, Cigna Healthcare nke California.
Ngalaba Corlọ Ọrụ (? Ngalaba?) Na-achịkwa Cigna Healthcare na atụmatụ ọrụ nlekọta ahụike ndị ọzọ n'okpuru Iwu Atụmatụ Nlekọta Ahụike Knox-Keene (Code Health and Safety Code 1340 et seq.) Yana ụkpụrụ Kọmịshọna (CCR Nkebi 1300.40 et seq .) Ngalaba na-ewere arịrịọ ọ bụla maka enyemaka (? RFA?) Anyị na-enweta nke ọma. RFAs ndị Ngalaba natara na-enyocha ọ bụghị naanị maka okwu (s) onye ọ bụla, mana yana anya maka nsogbu ndị nwere ike ịhazi usoro. Nyochaa RFA bụ ihe dị mkpa nke mbọ niile Ngalaba na-achịkwa.
Ngalaba enyochala ma ọ bụ na-enyocha RFA niile nke ezinụlọ Godfrey nyefere. Ntụleghachi nke Josephine Godfrey site na Ngalaba Mmanye Ngalaba. Nyocha a gụnyere, mana ọnweghị oke, site na nyocha nke ihe ndekọ ahụike dị mkpa, ajụjụ ọnụ na ndị ọrụ atụmatụ, yana mkparịta ụka sara mbara na ezinụlọ Godfrey. Site na nyocha a, Ngalaba Mmanye Iwu ahụ kpebiri na Cigna ejirila afọ ojuju mee mkpesa nke Oriaku Godfrey ma mepụta usoro iji dozie nsogbu ndị a.
Banyere Christopher Godfrey? S RFA, Cigna kwenyere ịnwe (Aha nke individuaL Omitted) RN dịịrị ma Mazi ma Oriakụ Godfrey iji nyere ha aka ịhazi nlekọta ha ugbu a ma dozie nsogbu ọ bụla ha nwere ike izute. Emechiri RFA abụọ a ugbu a. Agbanyeghị, etinyere ozi dị na ndị a na RFA niile n'ime iwu na-aga n'ihu nke Ngalaba iji hụ na atụmatụ ahụike na-akwado iwu Knox-Keene.
Ngalaba na-akọrọ gị nchegbu banyere ihe a na-akpọ? nkebiahịrị na nkwekọrịta ndị na-eweta ọrụ. Ngalaba ahụ chọrọ n'oge na-adịbeghị anya atụmatụ iji hichapụ otu nkebiahịrị na nkwekọrịta nke ndị na-eweta ya nke nyere ndị na-eweta ọrụ ka itinye atụmatụ ahụ 'n'ọnọdụ dị mma.' Ngalaba ahụ kwuru na mkparịta ụka a na nso nso a nye ndị ikikere niile, sị: "Dọkịta ọ bụla na-eme nkwekọrịta na ndị ọkachamara nlekọta ahụ ike ọzọ ga-enwe ike iji obi eziokwu kwuo okwu n'ụzọ ziri ezi banyere ihe ndị nwere ike imetụta ahụike na ebumnuche onye ọrịa iji bulie mmekọrịta ọdịnala nke ntụkwasị obi. obi ike dị n'etiti onye ọrịa na onye nlekọta ahụike.?
Na mmechi, Achọrọ m ọzọ iji mesie Ngalaba nkwa nke ọtụtụ nde ndị Californians debara aha na atụmatụ nlekọta ahụike. Ọ bụrụ n’inwere ajụjụ ndị ọzọ, biko egbula oge ịkpọtụrụ Onye Enyemaka Pụrụ Iche (Aha Ahapụ) N’obi,
Kọmishọna nke rationslọ Ọrụ
Edere m akụkọ a nye ndị omebe iwu mgbe m dị afọ iri na anọ, achọrọ m ịkọrọ gị ya.
Adị m afọ 14 ma bụrụ onye na-arịa ọrịa na-ezighi ezi. Ana m edegara Congress na Senate n'ihi na ịchọrọ inyere ndị ọdachi omume ahụike metụtara aka. Na-arịa ọrịa, isi m na-afụ ụfụ na mama m kpọgara m na dọkịta. Enwere m ọbara ọbara ugboro ugboro na isi ọwụwa. Echere m na nke a malitere na njedebe nke 1992 ma ọ bụ mmalite 1993. Ha kwuru na m dị mma, echetakwara m na otu dọkịta kparịrị mụ na mama m; achọghị ọbụna ikwu maka ya. O kwuru na ihe niile dị n'isi m, na m dịkwa mma. 1993 ye 1994 ikedịghe nti isua ke uwem mi. Enweghị m obi ụtọ. Mama m na-arịa ọrịa oge niile, na-akwa ụkwara mgbe niile, na-aga CIGNA na-enweta ọgwụ, ike na-agwụkarị ya. Mama m abụghịzi otu nne ọzọ; isi m na-akụ ma na-apụ, ike gwụrụ m ịghara inye mama m nsogbu n'ihi na m hụrụ ọrịa ya. Ọ na-ada mbà n’obi mgbe niile, na-ebe ákwá mgbe niile, na-adịkarịkwa mwute ma na-akwa ụkwara. M ga-abara ya mba ka o mechie ọnụ n'abalị ma mee ka anyị niile mụrụ anya, ugbu a ọ na-ewute m.
Na February 1994, enwere m nkụda mmụọ, isi m na-afụ ụfụ, ana m a andụ ọgwụ na ebe nchekwa ọgwụ, ọ bụghị oge mbụ m mere nke a, mana mama m na-arịa ọrịa na ọ maghị. Oge ọ bụla m were ihe karịa otu ụbọchị nne m batara ịkpọte m, agaghị m ebili, ike gwụrụ m. Mama m kwuru nke ahụ, yikwasị uwe; anyị na-aga CIGNA ozugbo. Agara m ebe ahụ na ndị dọkịta CIGNA hụrụ m. Ha zipụrụ m na ebe ahụike ọgụgụ isi ọ nweghịkwa ebe abụọ a maara ihe m mere. Mama m jegharịrị m wee gwa ya ihe m mere. Mgbe e mesịrị n'ụbọchị ahụ, ọ kwuru otú ọ ga-esi dịrị ndụ ma m nwụọ. Mama m bere ákwá n'ihi na ike gwụrụ ya ọ na-ebo onwe ya ụta n'ihi na ọ naghị eme ihe. M kwere mama m nkwa na m gaghị eme ihe a ọzọ. Mama m kpọrọ CIGNA ma were iwe banyere etu ha si hụ na m gbalịrị igbu onwe m, jụọ ha ụdị ndị dọkịta ha bụ. Mama m tiri mkpu nke ukwuu ha kwetara inye m anụ ahụ zuru oke. N'oge ahụ n'oge mbido Machị, anyị mere mkpesa nke ukwuu banyere isi m, ha kwenyere ime isi m. Ihe a gara n’ihu ihe dị ka ọnwa abụọ na ọkara, nyocha niile na-aga n’ihu, n’ikpeazụ dọkịta kwuru na achọrọ m ịsachapụ mmehie m, nke ahụ bụ na njedebe nke ọnwa Mee. Mama m jụrụ ma nke a ọ dị mkpa, ọ dị mkpa ịme ya ozugbo, dọkịta zara ya na ọ bụghị ngwa ngwa. Mama m kwuru na anyị ga-eme ya n'oge ezumike ezumike.
Ọtọn̄ọde ke May esịm August, eka mi ama ọdọn̄ọ idiọk idiọk. Ọ gara dọkịta na ha tinye ya na nkwarụ maka izu 6. N'etiti ọnwa Julaị, m rọrọ nrọ na mama m nwere ọrịa cancer akpa ume na ọ ga-anwụ. O wutere mama m nke ukwuu mgbe m gwara ya ihe a. Ka ọ na-erule ọnwa Ọgọst, nne m zigara m Ireland ka m gaa leta nne na nna m ochie. Mgbe m si Ireland lọta na ngwụcha ọnwa Ọgọst, ụlọ anyị nọ na ọgba aghara, maka izu 2 CIGNA jụrụ inye mama m ụzarị igwe ojii ya niile na-agwa ya na ha efuola. Ọ nwetachara ha wee gosi na o nwere ọrịa kansa akpa ume ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2. Mama m nwere ịwa ahụ na-ewepụ 20% nke akpa ume ya. O nwere akpụ carcinoid. Mgbe mama m nọ n'ụlọ ọgwụ, dọkịta na-awa ahụ gwara nna m nke nna ya na ahụ adịchaghịkwa. O mechara bụrụ na CIGNA jụrụ ịhapụ ihe ndekọ nna m maka izu 2. Mgbe ha gakwuuru dibia dibịa, CIGNA nọ na-agwọ ya maka ụkwara ume ọkụ; ọ nwere n'ezie ọrịa dị elu nke COPD ma nwee ihe dị n'akụkụ akpa aka ekpe ya dịka mama m nwere.
Anyị gara wee nweta akwụkwọ ndekọ ahụ maka ezinụlọ anyị niile. Mgbe anyị hụrụ nke m, anyị gakwuuru onye dibịa nọ na mpụga, mgbe anyị gakwuchara ndị dibịa, amaara m ugbu a ihe dị iche na ezigbo dọkịta na dọkịta CIGNA, enwere m olileanya na otu ụbọchị m ga-agwa gị ihe niile gbasara nke ahụ. . Enwere m nsogbu ebe ọkpụkpụ a na-ebibi, ebe ọkpụkpụ na-esi na orbit gafere, dọkịta ahụ kwuru na anya m gaara apụ. A wara m ahụ na Cedar-Sinai. 1995 adịghị mma karịa na 1993 dịka ọ dị ka enweghị ikpe ziri ezi maka ihe ndị a niile CIGNA mere anyị. Anyị chọrọ ime ka iwu gbanwee ka mmadụ ghara ịta ahụhụ otu a ọzọ. CIGNA na-emejọ ezinụlọ anyị ruo taa. Ha na-eme mama m ákwá ruo ọtụtụ awa ma enwere m olileanya na ị ga-ahapụ ka m kọọrọ gị ihe niile banyere nke a kwa. CIGNA kwesịkwara ịma ma ndị mụrụ m nwụrụ, ebee ka m ga-aga, kedukwanụ ihe ga-eme nwanne m nwoke na ụmụnne m nwanyị? Abụ m onye America, ma mgbe m tolitere, achọghị m ibi ebe a. Achọrọ m ịkwaga ebe ndị mmadụ dị mma ma nwee obiọma. Aga m akwaga Ireland.
Ugbu a m bụ 27 Afọ. Agbanyeghị ọ dị nwute na ezinaụlọ ọ bụla ga-ata ahụhụ n'ụzọ a, ndị aghụghọ na ndị aghụghọ ahụ agbanahụ ntaramahụhụ na Steeti California.
Daalụ CIGNA GLENDALE
Akaebe Iwu Sineti Na - anụrụ steeti California na Mọnde Mọndee nke iri na abụọ n’afọ 12 na 1997PM
Abiala m ịkọrọ gị ahụmahụ m. Ngalaba nke ụlọ ọrụ na-ada ada n'ọrụ njikwa ya, ahụmịhe nke ezinụlọ m gosipụtara nke ahụ. Ahụmịhe nke onwe m na Cigna Healthcare ga-egosiputa otu esi emegbu ndị ahịa, yana otu Ngalaba nke Corporations ji emechi anya.
Ahụmahụ m na Cigna malitere site na mmetọ nke ndị mụrụ m, na ha n'aka ha mekwara mkparị ahụ megide onye ọ bụla n'ime ezinụlọ m. Mgbe m na-arịa ọrịa, chọọkwa dibịa, ha ga-eziga m na oge a kara aka, ihere ga-emekwa m n'ihi na ọtụtụ mgbe dibia ebe ha zigara m anaghị atụ anya m. N’ihi ya, Cigna zigaara m akwụkwọ ozi na-ekwu na m nwere ike ịhọrọ onye dibia nke m na ha ga-akwụ ụgwọ maka ọgwụgwọ ahụ. Ha mere nke a otu oge, ha akwụghị ụgwọ maka nlekọta ahụ ike, ndị ụlọ ọrụ na-atụkọta m yikwara m egwu na a ga-agba m akwụkwọ ma ọ bụrụ na akwụghị m ụgwọ ahụ. Cigna kwukwara na m nwere ike ịhọrọ dọkịta m họọrọ n’ebe obibi m Santa Barbara, nke a emeghịkwa. Cigna kenyere m dostor na Santa Barbara mana mgbe m na-arịa ọrịa ma chọọ ịwe oge ọ bụla m kpọrọ dọkịta na ọ kpọghachighị oku m. Mgbe anyị kpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị dọkịta, ha kwuru na ha esoghị arụ ọrụ ọzọ na Cigna, n'ihi na Cigna agaghị eme ndenye aha mgbe ndị ọkachamara chọrọ.
N'afọ gara aga, achọrọ m nlekọta pụrụ iche, n'oge usoro ahụ dọkịta kwuru na achọrọ m Biopsy. Ọ ghaghị ịkwụsị n'etiti ma nweta ikike site na CIGNA iji gaa n'ihu. Dọkịta ahụ kwuru na e jikọtara usoro abụọ ahụ na ọ dịghị atụ anya ka ọ rụọ MEDICINE n'ụzọ dị otú a na mbụ. Mgbe usoro a gasịrị mgbe m mere mkpesa na Ngalaba nke Corporations banyere Cigna a gọrọ ebubo ahụ wee zaghachi na dọkịta ahụ hiere ụzọ. Kemgbe ahụ dọkịta ahụ bịakwutere onye ọkaiwu ya na Santa Barbara ọ kwuru na ọ rụrụ Biopsy na-enweghị ikike ha, akụkọ m banyere ihe ahụ merenụ ziri ezi. Dọkịta ahụ kwuru na ọ dị m mkpa ịgbaso ụbọchị 90 ọ bụla n'ihi na nke a bụ ọnọdụ ọrịa kansa. Cigna kwuru na ọ bụrụ na achọrọ m ọpụrụiche a ọ dị m mkpa ịga site na dọkịta nlekọta ahụike iji jide n'aka na achọrọ m ya, ha wee kenye m dọkịta na-elekọta isi na Santa Maria, ọbụnadị n'otu ógbè ahụ, na karịa otu elekere site na ebe obibi m.
Abụ m nwa akwụkwọ m na-aga UC Santa Barbara, enweghịkwa m njem. Ọ bụghị naanị nhọrọ bara uru., Na Ngalaba Corpolọ Ọrụ kama inyere m aka, onye nọ na Cigna na-ahụ maka ịkpagbu m na igbochi ọgwụgwọ m kpọrọ m ọzọ
Mee 12, 2008 na 8: 38 PM
Mgbe m nwesịrị United ruo ọtụtụ afọ ụlọ ọrụ m agbanweela na CIGNA.M nwere n'oge na-adịbeghị anya ịnwe MRI na azụ m wee kọọrọ m ya na DR.s SEcretary CIGNA dị njọ na ịnye ikike ihe ọ bụla.Ọ were ụbọchị 5 iji kwado ya, mana ọ bụ naanị mgbe dọkịta m rịọrọ arịrịọ. Agwara m ọbụlagodi na ha kwadoro usoro, mgbe ụfọdụ ha tụgharịrị ma gọnahụ ya na-ekwenyeghị na nkọwa ha, na ị ga-akwụ ụgwọ ahụ. oku sitere na CIGNA tonite iji lee ma m ga-enwe mmasi ikpo oku “NURU HA” maka nsogbu iku ume, obi, azu, ma obu okpukpu n’odinihu karia iga PCP m !! Agwara m ha na agaghị m enwe afọ ojuju ka “ahụ m” na ekwentị ma kelee gị na agbanyeghị. O wutere ya nke ukwuu na anaghị m asọpụ na onyinye ahụ.
Enwere m oke ụjọ maka nsogbu ahụike ọ bụla m chọrọ ka ekwusara karịsịa na enwere m 7yr ochie, na CIGNA dị ka ụlọ ọrụ na-adịghị echebara echiche mgbe m gụsịrị ihe ndị a. Enwere m ike ikpe ekpere ka anyị niile nwee ahụ ike, n'ihi na CIGNA abụghị maka penny ọ bụghị nwee ndidi !!!! Emere ka nke a doo m anya n’ime naanị izuụka !!!!!!!!!!!
daysbọchị gara aga ahịhịa
Ọkt 1, 2008 na 6:18 PM
Ana m arụ ọrụ maka nnukwu ụgbọ elu na cigna dị ka ins m. m kụwara azụ m na-arụ ọrụ, na-arụ ọrụ, clocked na. a hanga manager gwara m na nke a bụ "B ONGH THE ọrụ nsogbu" !!
na-emechi, susuo m ịnyịnya ibu m maka ndị metụtara, maka ndị na-enweghị ya, nwee mwute maka ihe mgbu gị na ndụ gị
Ọkt 7, 2008 na 1:14 PM